Butwal Today News | शिक्षा / स्वाथ्य | All news
शिक्षा / स्वाथ्य
विद्यार्थीले किताब देखेकै छैनन्, शैक्षिक सत्र सकिँदै
चिसो मौसम, गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न तीन दिन लाग्छ । पर्याप्त भौतिक पूर्वधारदेखि अन्य सामग्री पाउन फलामको चिउरा चपाएझैँ हुन्छ तर बाध्यता र विवशताको बीचमा सबै कुरा नपुगे पनि पुगेझैँ गर...
चिसो मौसम, गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न तीन दिन लाग्छ । पर्याप्त भौतिक पूर्वधारदेखि अन्य सामग्री पाउन फलामको चिउरा चपाएझैँ हुन्छ तर बाध्यता र विवशताको बीचमा सबै कुरा नपुगे पनि पुगेझैँ गरी काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यो भनाइ हो- डोल्पा शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका-८ स्थित तापिरिचा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक घनश्याम शर्माको ।
सोह्र शिक्षक कर्मचारीको नेतृत्व गदै उनी विसं २०६१ देखि अहिलेसम्म सो ठाउँमा कार्यरत छन् । पर्वतमा घर भए...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलेकोभिड–१९ को महामारीमा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन दूर सञ्चार प्रदायकहरुलाई निश्चित रकम दिने र स्थानीय तहले काम गर्नेगरी इन्टरन...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलेकोभिड–१९ को महामारीमा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन दूर सञ्चार प्रदायकहरुलाई निश्चित रकम दिने र स्थानीय तहले काम गर्नेगरी इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजनामा सरकार रहेको जनाएको छ ।
विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको दिवा खाजा बजेटलाई रकमान्तर गरेर सिकाइ सहजीकरणका निम्ति अनलाइन व्यवस्था गर्न खर्च गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले आङ्गिक क्याम्पस थप गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा बुटवलमा लुविवि सिटी क्याम्पसका रुपमा आङ्गिक क्याम्पस थप गरिने भएको हो । लु...
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले आङ्गिक क्याम्पस थप गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा बुटवलमा लुविवि सिटी क्याम्पसका रुपमा आङ्गिक क्याम्पस थप गरिने भएको हो ।
लुविविको गत असोज २६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न १२ औँ सभाले आङ्गिक क्याम्पस थप गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसैगरी दोस्रो चरणमा देवदहसहित क्रमशः बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम र वाग्मती प्रदेशको काठमाडौँसहित केही हिमाली जिल्लामा आङ्गिक क्याम्पस सञ्चा...
लुम्विनी आयुर्वेदिक औषाद्यालय बुटवलका विष्णुहरि आचार्य (योगिराज) आफु संक्रमित हुँदा पनि योग सिकाउनमै केन्द्रित रहे । कोरोना संक्रमणपछि बुटवलको एन्फा टेक्निकलमा रहेको आइसोलेसना उनी रहेका थि...
लुम्विनी आयुर्वेदिक औषाद्यालय बुटवलका विष्णुहरि आचार्य (योगिराज) आफु संक्रमित हुँदा पनि योग सिकाउनमै केन्द्रित रहे । कोरोना संक्रमणपछि बुटवलको एन्फा टेक्निकलमा रहेको आइसोलेसना उनी रहेका थिए । त्यसबखत उनले त्यहाँ रहेका संक्रमितलाई योग सिकाए ।
महामारीका कारण मुलुक लकडाउन भएपछि समाजमा डर त्रास बढेको अवस्थामा उनले संभावित संक्रमितहरु रहेका क्वारेन्टाइनहरुमा योग शिक्षाका साथै योग सिकाउँदै आएका छन् । क्वारेन्टाइनमा दिन विताइरहेकाहरुक...
स्वस्थ रहन व्यायाम र उपवास
खराब खानपान, जीवनशैली र पर्यावरणको कारण हाम्रो शरीरमा विभिन्न विकार जम्मा हुन्छ । यही विकार हो, शरीरमा रोग पैदा गर्ने । जति जति शरीरमा विकार जम्मा हुँद...
शरीर शुद्धिकरणको सबैभन्दा सरल र प्रभावकारी विधी हो...
आरुसले पाए नयाँ जीवन
लक्ष्मण र पुनम श्रेष्ठको परिवारमा असोज ९ गते शुक्रबार डरलाग्दो घटना घट्यो । अन्य दिन झै घरको छतमा खेलिरहेको कान्छा छोरा आरुस श्रेष्ठ दुर्घटनामा परे । ४ वर्षिय आरुस एक तला घरको छतबाट टाउकाक...
लक्ष्मण र पुनम श्रेष्ठको परिवारमा असोज ९ गते शुक्रबार डरलाग्दो घटना घट्यो । अन्य दिन झै घरको छतमा खेलिरहेको कान्छा छोरा आरुस श्रेष्ठ दुर्घटनामा परे । ४ वर्षिय आरुस एक तला घरको छतबाट टाउकाको भरमा बजारिन पुगे । घरभित्र काममा ब्यस्त आमा पुनमले छरछिमेकको हल्लाखल्ला भएपछि बल्ल थाहा पाए । करीब १५ फिट उचाईबाट सिधै भुईमा टाउकोको अगाडीको भाग ठोक्कीएका बच्चालाई गम्भिर चोट लागेको थियो । रक्तश्राप भैरहेको अर्धचेत बच्चालाई परिवारका सदस्यले बोकेर आम्दा अस्पताल लगे ।
रेडियोको भरमै पढाई
कपिलवस्तुको यशोधरा गाउपालिका रामनगराकी कक्षा ७ मा पढने मनिषा यादब जहाँ भएपनि २ नबज्दै रेडियो नजिक पुग्छिन् । गाउकै कक्षा ८ मा पढने शारदा यादब पनि हतारिदै रेडियो भए ठाउँ पुग्छिन् । उनीहरु द...
कपिलवस्तुको यशोधरा गाउपालिका रामनगराकी कक्षा ७ मा पढने मनिषा यादब जहाँ भएपनि २ नबज्दै रेडियो नजिक पुग्छिन् । गाउकै कक्षा ८ मा पढने शारदा यादब पनि हतारिदै रेडियो भए ठाउँ पुग्छिन् । उनीहरु दुबै जना रेडियो राखिएको ठाँउ गाउकै कक्षा ८ मा पढने सोनी यादबको घरमा पुग्छन् । तीनै जना रेडियो सुन्दै पढछन् । उनीहरु जस्तै यशोधरा गाउपालिकाका अधिकान्स बालबालिका रेडियोबाट पठनपाठन गरिरहेका छन् ।
कोरोरा भाईरस संक्रमणको जोखिमकाकारण गत चैत्र १...
प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिव्यालाई कोरोना संक्रमण
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) की डीन तथा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी चिकित्सक प्रा डा दिव्या सिंह शाहलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पिसिआर परीक्षण गर्दा उनमा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।...
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) की डीन तथा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी चिकित्सक प्रा डा दिव्या सिंह शाहलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
पिसिआर परीक्षण गर्दा उनमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । विगत ४ दिनदेखि ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र थकान महसुस भएपछि हिजो उनको पिसिआर परिक्षण गरिएको थियो ।
स्वास्थ्यमा समस्या नदेखिएको हुँदा उनी होम आइसोलेसनमा रहेकी छन् ।
आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिलाई सतक रहन र केही लक्षण देखिएमा परीक्षण गर्न समेत डा. शाहले अनुरोध ग...
दिगो विकास लक्ष्य ४ हासिल गर्न कठिन
दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजि गोल) ४ हासिल गर्न शिक्षाक्षेत्रको ‘तदर्थवाद’ मा सम्भव नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । यसका निम्ति संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै सरकारले स्पष्ट कार्य...
दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजि गोल) ४ हासिल गर्न शिक्षाक्षेत्रको ‘तदर्थवाद’ मा सम्भव नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । यसका निम्ति संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन थाल्नुपर्नेमा उनिहरुले जोड दिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै ‘एसडिजि ४’ सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रारुप तयार पारेको छ । त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल केन्द्रित थियो । एसडिजिक...
प्रदेश ५ सरकारले नमूनाको रुपमा विकास गर्न लागेको विद्यालयहरुमा स्टाफ नर्स र खेलकुद प्रशिक्षक राख्न शुरु गरिएको छ । प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ देखि नमूना विद्यालयको कार्यक्...
प्रदेश ५ सरकारले नमूनाको रुपमा विकास गर्न लागेको विद्यालयहरुमा स्टाफ नर्स र खेलकुद प्रशिक्षक राख्न शुरु गरिएको छ । प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ देखि नमूना विद्यालयको कार्यक्रम अगाडी बढाएको छ ।
स्थानीय सरकारको २० प्रतिशत लागत सहभागीता रहनेगरी प्रदेश सरकारले १२ वटा नमूना विद्यालयको कार्यक्रम अघि सारेको छ भने नयाँ आर्थिक बर्षमा थप १२ वटा विद्यालयको लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।